Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Portuguese Andre Silva Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara "Onye nketa CR7". Nwa anyi Andre Silva Akụkọ ya na ihe omuma nke oma Eziokwu na-ewetara gi akuko zuru oke nke ihe omuma ama site na nwata rue oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha, ndabere ezinụlọ na mmekọrịta ndụ. N'ikwu nke a, ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-emepụta-enweghị ihe ọmụma banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere mma ya. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Andre Silva's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Andre Silva Childhood Akụkọ - Mmalite na Ndụ Ezinụlọ:
Malite, aha ya bụ André Miguel Valente da Silva. A mụrụ Andre na 6th nke November 1995 ka ndị mụrụ ya, Mr na Mrs Álvaro Silva na Baguim do Monte, Portugal.
Andre biliri site na mmalite dị umeala wee ghọọ ihe ọ bụ taa. Ma nne na nna ya bụ ndị na-arụsi ọrụ ike bụ ndị jidere n'aka na Silva na nwanne ya nwoke nke nta, Afonso nwere ihe niile ha chọrọ ime na ndụ. Na ederede onwe gị, Andre abụwo nwanne nwoke na-ahụ n'anya nke na-elekọta nwanne ya nwoke, bụ Afonso. N'okpuru bụ foto nke ụmụnne abụọ ahụ n'oge ha bụ nwata.
Little Afonso Silva nke dị n'elu bụ ugbu a ọkpụkpọ hockey ọkachamara nke na-egwuri egwu. A mụrụ Afonso na ụbọchị 18th nke December 1998.
N'ịbụ onye na-ebi ndụ na nne na nna ya, Andre na ụmụ nwanne nna ya biri n'oge ọ bụ nwata. Site n'ikwu ya, o nwere nnukwu ezinụlọ, ezinụlọ na-akpachi anya nke ga-ezukọ ọnụ kwa Sunday.
Andre Silva Biography nwata - Bulọ ọrụ:
Andre Silva nwere ezigbo nkwanye ùgwù, gosipụtara ya ma meghee ya nke ọma mgbe ọ na-eburu ihe ịma aka dị ka ịgba bọl na ụlọ akwụkwọ. Dị nnọọ ka ọtụtụ ndị ọkachamara na-agba ọsọ ụkwụ nke oge a, Silva nwere mmasị dị ukwuu na football kemgbe ọ bụ nwata. Ọ chọsiri ike ịbụ ọkachamara n'ịgba ọsọ site na mmalite.
Mgbe o kwusiri ike, nne na nna ya kpebiri ịkpọrọ nwa ha nwoke dị afọ isii na Salgueiros maka ịgba bọl. Nhọrọ a maka ọnọdụ football bụ nke nne ya kpaliri ịjụ ịhapụ ọkpara ya, nke ka dị obere.
Alexandre Pereira, onye nhazi oge ahụ nke ndị ntorobịa nke Salgueiros, chetara na mgbe ya zutere Andre, ya nwere echiche mbụ banyere nwata nwoke gụrụ akwụkwọ nke ukwuu.
Ọ bụ onye na-adaghị bọl ahụ ruo mgbe a manyere ya ịga n'ụlọ iji hụ ndị mụrụ ya.
Andre Silva Biography Eziokwu - Fmụaka Aha:
N'ụzọ dị ịtụnanya, ọganihu André Silva bịara n'otu afọ ahụ ọ sonyere Salgueiros. Thebọchị anwansi bụ mgbe afọ asatọ gara asọmpi na Viana do Castelo na ndị otu ya na Salgueiros nọ na-ese n'okpuru.
Andre Silva na-egwuri egwu dị ka onye midfielder n'oge niile. N'oge ọgụ knockout megide asọmpi Vianense ndị ntorobịa, egwuregwu ahụ ka nọ n'etiti mgbe Magical Silva nwetara ihe mgbaru ọsọ 15th ya.
O Ee, o meriri ihe mgbaru ọsọ ya 15 na egwuregwu ahụ !!
Ihe ngosi a wee nye ya aha “Enweghi Mma“. Na egwuregwu ahụ, onye nkụzi ya kpebiri ime ihe ọ bụla ndị nchịkwa ọ bụla ga-eme iji gosi nkwanye ùgwù maka ndị mmegide ahụ. Luís Machado wepụrụ Silva ozugbo na otu mgbe o meriri goolu nke iri na ise ya. Machado gbachitere omume ya site n'ikwu;
Agwara m ya na e meriri egwuregwu ahụ, anyị anọghị ebe ahụ iji wedaa onye ọ bụla ala, ọ dịkwa mma na Andre na-enye ndị otu egwuregwu ibe ya ohere ”
Andre Silva Biography Eziokwu- tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Ọ bụ naanị afọ 8, mana ọ na-eto eto karịa ndụ. N'ihe na-erughị afọ abụọ nke ịbanye Salgueiros, Andre Silva aka “Obere Deco”Ghọrọ otu n'ime ụmụaka egwuregwu kachasị ama na Porto. Nke a dọtara mmasị nke Jorge Mendes dị ka ụlọ ọrụ ya Gestifute nwetara obere Silva. Ọ bụ njem nke gbakwụnyere mmanụ ọkụ n'ọkụ naanị etinyere n'ime nwatakịrị ahụ.
Mụ na Jorgie Mendes n'akụkụ ya, Silva hụrụ ọganihu na ntorobịa ya na Porto mgbe ọ nwụsịrị na Boavista na Padroense klọb ndị ntorobịa. N'ihi ntorobịa ya, ọ hụkwara ụzọ na-enweghị ntụpọ site na ntorobịa ntorobịa gaa n'akụkụ agadi mgbe ọ dị afọ 16.
Mgbe ọ dị afọ 18, Silva ghọrọ onye Portuguese football nọ na-echere ogologo oge. Ọ ghọrọ ihe ha chọrọ. Ọ bụ 9 na nke kachasị mkpa, onye nwe Cristiano Ronaldo.
Andre Silva Bio - Ihe Mgbada Milan
Na 12 June 2017, Silva kwagara AC Milan na nkwekọrịta afọ ise maka ego nke € 38 nde. Ọ ghọrọ onye Portuguese nke atọ na-egwu AC Milan mgbe emechara Paul Futre na Rui Costa. Nke ka mkpa bụ na Silva ghọkwara ihe dị oke ọnụ ahịa na akụkọ ihe mere eme nke Italiantali.
Silva lụrụ ọgụ maka ọdịdị n'oge mbụ ya na Italytali. Nke a mere dị ka ọ kwenyere na ya nwere nsogbu ịbanye na Milan na Serie A.
Mgbe nyochachara, achọpụtara na nnukwu okwu Silva bụ na ọ nweghị ike imeghari ka ndụ Italy na ihu igwe. Dị ka akụkọ si kwuo;
Ọ bụ ịghọgbu asụsụ ọhụrụ, ndị ọhụrụ, omenala ọhụrụ na ìgwè ọhụrụ.
Silva jisiri ike naanị akara abụọ na 24 Serie A. Ụdị adịghị mma a gbanyere azụ ka ọ na-akwatu iwu ahụ.
Andre Silva Biography Eziokwu - Mweghachi:
N'agbanyeghị oge siri ike na Milan, Andre Silva lekwasịrị anya na 2018 World Cup. Na Russia, o mere ndekọ dị ka otu n'ime ndị egwuregwu ise (nke ọdụdụ) iji gụọ opekata mpe isii.
Ebe ọ bụ na 2018 World Cup, Silva ghọrọ ihe karịrị otu Immobile no.9 bụ ndị na-etinye bọl n'ime ụgbụ. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Andre Silva Love Akụkọ na Sara Rodrigues:
O doro anya na Silva amawo ihe mgbaru ọsọ ndị mara mma. Otú ọ dị, ihe mgbaru ọsọ kachasị mma nke André Silva sụgharịrị bụ nke kpuchiri mmekọrịta ya na Sara Rodrigues, ihe nlereanya nke Portuguese nke 21.
Sara gụsịrị akwụkwọ na Chemical Engineering nke na-egosi ịma mma na ụbụrụ. O raara onwe ya nye ihe nlere na ime njem n'etiti Milan, Rome, Porto na Lisbon. Di na nwunye a kwenyere na ha di n'otu kemgbe oge ya na Porto. Dị ka n'oge ederede, Sara na-achịkọta Instagram na-esote ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị 58,000, bụ ndị na-enweghị ike ịnweta ya bikini snaps (lee n'okpuru).
Ọ bụ ezie na Silva na-arụsi ọrụ ike na ịkparịta ụka n'socialntanet ma ọ bụrụ na ọ ga - aga, ọ na - ajụ itinye foto foto Sara, ịhụnanya maka ndụ ya. Naanị oge tupu ndị hụrụ gị n'anya gbanwere mgbanaka ahụ.
A na-akọkwa Andre Silva ka ọ nwee nwa nwoke dị n'okpuru ogwe aka ya dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru. Dịka n'oge edere, ọ dịghị eziokwu doro anya banyere onye nne nke nwa ya.
Eziokwu nke Andre Silva:
Silva na-arụsi ọrụ ike site n'inwe obi ike. Ọ bụ onye kpebisiri ike ma kpebisie ike na ya ga-anọgide na-alụ ọgụ ruo mgbe ọ ga - akacha mma. Ị nwere ike ijide n'aka na Silva ga-edebe nzuzo gị, ihe ọ bụla ha nwere ike ịbụ. N'oge ememe, Silva hụrụ ka ya na nwanne ya nwoke bụ Andre na-aga hockey.
Ejikọtara ihe mmewere Mmiri na akara zodiac Andre Silva. Nkọwa mmiri dabara adaba maka njirimara Scorpio ya.
Onye Na-ahụ Maka Mmiri: Andre Silva kwetara na ya nwere nsogbu ịbanye ná ndụ na Milan na Serie A, karịsịa ma a bịa na-efu "osimiri na oké osimiri. "Mgbe ọ sonyere ndị gọọmenti Italian ahụ, ọ gwara onye isi ụlọ ọrụ bụ Forza Milan na-ahụ maka ụlọ ọrụ ahụ;
"Ọ bụ oge mbụ m bi n'ụlọ m, ezinụlọ m na osimiri. Ọ na-eme m ka m na-eku ume n'ụsọ oké osimiri, "
Ị maara?? Inwe ịhụnanya na mmiri na-egosi inwe mmetụta uche, nke na-erugharị, nke na-agbagha. Dị ka mmiri ga-esi na-emetụta mmetụta dị ike ya, otú ahụ ka Silva dị ka ọ na-eme n'ọhụụ ọrụ ya. Silva bụ onye na-enweghị nchekasị na onye nwere nlezianya nke nwere ike iburu mmetụta nke ndị ọzọ, hazie ha, ma tinye atụmatụ ma ọ bụ ngwọta nke ga-eji akọ na uche nye mmadụ nile.
Dị ka n'oge ederede, ọ ka na-eme backflips ma ka na-emezue nkà.
Ọ na-agba n'ime ezinụlọ. Ọrụ mmiri na-akọwa oge obi ụtọ maka Silva na Afonso.
Dị ka ọ dị mkpa inwe mmiri mmiri, Silva na-ahụ n'anya na-ekiri mmiri. Nke a na-akọwa ihe mere o ji nweta ọrịa ụlọ mgbe ọ hapụrụ obodo ya maka oge mbụ.
Eziokwu Andre Silva - Ihe mara mma mara mma:
Nabata ya: Cristiano Ronaldo amalitelarị ịfefe ọkụ na Silva. N'ihi na ọtụtụ football Fans, Andre Silva anya cuter karịa onye nduzi ya.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Andre Silva Childhood akụkọ tinyere akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.